पुस १० सार्बजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय : – List Khabar
Home / समाचार / पुस १० सार्बजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय :
पुस १० सार्बजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय :
admin December 22, 2021 समाचार Leaveacomment 2,690 Views
पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गरेको छ । क्रिसमसको अवसरमा प्रदेश सरकारले पुस १० गते (बुधबार) सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साल वैशाख १ गतेको निर्णयअनुसार नै क्रिसमसलाई दृष्टिगत गरी नगरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
विदेश तिर धेरैजसो ठाँउमा जाडोको सिरेटोले आफ्नो गति बढाइसकेको हुनुपर्छ । हिउँद, हिउँ अनि चिसो सिरेटोबिचको यो पर्व क्रिसमसका धेरै पाटाहरु हिउँसंग जोडिएका छन् । क्रिसमसको यो पावन पर्वको उल्लास एउटा क्रिसमस गीतको सरल नेपाली अनुवादबाट शुरु गरौंः
Previous are you varjn ? पत्रकार को प्रश्न? जोतिले यस्तो दिईन् उत्तर…
Next काठमाडौँ उपत्यकामा नै पतिले गरे पत्निमाथि हद पार गरेर यस्तो ज्यादती..